New Line Straight Line Beveling Edge Glass Edging Polishing Machine Miaraka Valo Fitotoana Vary
Fampahalalana momba ny vokatra & Qutation Sheet EXW vidiny 65000 RMB Daty 2020/12/9 Valid Ny teny nalaina dia manan-kery mandritra ny 30 andro. Fandoavana T / T. Fonosana & fanaterana tranga hazo mahazatra; 30 andro (1200RMB) Parameter Item 1: karazan-tsipika vaovao mahitsy miendrika vera milina polina milina fanenoman-doha miaraka amina loha milina valo Model 9001-8 Dimension 3700 * 1300 * 1700mm Lanja 1400kg Max haben'ny fanodinana 200cm * 200cm Min habe fanodinana 4cm * 4cm Varavarana fanodinana vera 3mm-12 m ...
Ny masinina avo lenta fitaratra avo lenta dia mety amin'ny fikolokoloana vera fisaka misy lafiny roa mahitsy.
Fitotoana henjana, fikosoham-bary tsara, zoro fiarovana amin'ny famolavolana (kodiarana fiarovana azo antoka) vitaina indray mandeha.
Mivezivezy amin'ny lohany amin'ny alàlan'ny torolàlana mihodina avo roa heny, fiara fitifirana baolina roa hahatratra ny hafainganam-pandeha mihetsika, manafoana ny fahazoana mivezivezy amin'ny finday, mampihena ny fanoherana sy ny fikorontanana, hahazoana antoka ny fametahana toerana.
Famaritana Fikarohana sy fampandrosoana tsy miankina tanteraka, famolavolana, famokarana, azo namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa manokana. Namboarina manokana 6mm matevina 6061 matevina indostrialy indostrialy hialana amin'ny adin-tsaina anatiny, hiantohana ny ain'ny serivisy sy ny fahaizan'ny enta-mavesatra vita amin'ny alimina aluminium, ny fametahana milina fanodinana milina lehibe, hahazoana antoka ny fahamendrehana sy ny fahamendrehan'ny tampon'ny fametrahana azy, hanatsara ny marina Mampiasà fenitra nasionaly matanjaka avo ...